"မမျှော်လင့်ပဲ ရလာတာတွေက ပိုပြီး ရင်ခုန်စရာ ကောင်းပါတယ် ဆိုတဲ့ " မင်းသမီးချောလေး အေးဝတ်ရည်သောင်း - Zeekwat Hot News
“မမျှော်လင့်ပဲ ရလာတာတွေက ပိုပြီး ရင်ခုန်စရာ ကောင်းပါတယ် ဆိုတဲ့ ” မင်းသမီးချောလေး အေးဝတ်ရည်သောင်း
June 20, 20190270
ပရိသတ်ကြီးရေ…. မင်းသမီးချောလေး အေးဝတ်ရည်သောင်းကတော့ ပရိသတ်တွေကြားမှာ အထူးရေပန်းစားလို့ နေပါတယ် မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေ နဲ့ အမြဲလိုလို သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့နေတတ်တဲ့ သူမရဲ့ ပင်ကို အလှတွေကြောင့် ပုရိသေ တွကြားမှာ ရေပန်းစားသလို ပရိသတ်တွေကြားမှာ လည်း သူမရဲ့ မြန်မာဆန်တဲ့ အလှတွေတွေကြောင့် အားလုံးမအေး
Source: Aye Thaung- Facebook
သောင်း လေးကို ၀န်းရံလို့နေတာပါ မကြာသေးမီက မှ အသက်(၃၇)နှစ်ပြည့်သွားခဲ့တဲ့ မအေးသောင်းကတော့ အခုချိန်ထိ လှပတင်တယ်လို့ နေပါတယ် အပျိုကြီးတစ်ယောက်ဘ၀ နဲ့ ဘ၀ကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ သူမကတော့ စိတ်ထားေ လး လည်း ကောင်းသလို ပရိသတ်တွေနဲ့ ရင်းနှီးစွာ ဖြတ်သန်းတတ်သူ တစ်ယောက်ရဲ့ အထာတွေ မရှိတဲ့ သူမရဲ့ စိတ်
ထာလေးတွေကြောင့် သူမကို ချစ်ပရိသတ်တွေက ပိုပိုလို ချစ်နေကြတာပါ အခုလတ်တလောမှာ သူမကတော့ ဖိတ်ကြား စထားတဲ့ ပွဲအတော် များများကို တက်ရောက် ချီးမြှင့််ပေးရှိပြီး ပွဲတပွဲတက်တိုင်း သူမရဲ့ ဖက်ရှင်ပုံရိပ်လေးတွေက လူတွေရဲ့ နုတ်ဖျား မှာ ရေ ပန်းစားလို့ လည်း နေပါတယ် သူမရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်လေးတွေကတော့ ဇာတ်လ
မ်းတွဲလေးတွေကို ရိုက်ကူလေး နေသလို ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ လည်း ရိုက်ကူးလို့ နေပါတယ် အခုတခါမှာ ဆိုရင်လ ည်း သူမရဲ့ ပရိသတ်တွေ အတွက် အလွမ်းပြေ “ဘ၀ဆိုတာ မမျှော်လင့်ထားတာတွေပဲ ဖြစ်လာတာများတယ် မဟုတ်လား မမျှော်လင့်ပဲ ရလာတွေ သိလာရ တာ တွေက ပိုပြီး ရင်ခုန်စရာကောင်းပါတယ်” ဆိုတဲ့ စာသာလေး နဲ့ သူုမရဲ့ အလှပုံ
ရိပ်လေးတွေကို တင်ဆက်ပေးထား တာကို ချစ်ပရိသတ်တွေ သိရှိခံစားနိုင်အောင် လို့ ပြန်လည်လို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါ ရစေနော် ချစ် ပရိသတ်ကြီး က အေးသော င်းလေးကို ချစ်ရင် တခုခုပြောခဲ့နော် ….အနုပညာရှင်တွေရဲ့ နေ့စဉ်လှု ပ်ရှားမှု ပုံရိပ်လေးတွေကို သိရှိခံးစားနိုင်အောင် ဇီးကွက် Pageလေးကို Like လေး လုပ်ဖို့ ပြောခဲ့ပါရစေနော်.….…။
“မမြှျောလငျ့ပဲ ရလာတာတှကေ ပိုပွီး ရငျခုနျစရာ ကောငျးပါတယျ ဆိုတဲ့ ” မငျးသမီးခြောလေး အေးဝတျရညျသောငျး
ပရိသတျကွီးရေ…. မငျးသမီးခြောလေး အေးဝတျရညျသောငျးကတော့ ပရိသတျတှကွေားမှာ အထူးရပေနျးစားလို့ နပေါတယျ မွနျမာဝတျစုံလေးတှေ နဲ့ အမွဲလိုလို သိမျသိမျမှမှေ့နေ့တေတျတဲ့ သူမရဲ့ ပငျကို အလှတှကွေောငျ့ ပုရိသတှကွေားမှာ ရပေနျးစားသလို ပရိသတျတှကွေားမှာ လညျး သူမရဲ့ မွနျမာဆနျတဲ့ အလှတှတှေကွေောငျ့ အားလုံးမအေး သောငျး လေးကို ဝနျးရံလို့နတောပါ မကွာသေးမီက မှ အသကျ(၃၇)နှဈပွညျ့သှားခဲ့တဲ့ မအေးသောငျးကတော့ အခုခြိနျထိ လှပတငျတယျလို့ နပေါတယျ အပြိုကွီးတဈယောကျဘဝ နဲ့ ဘဝကို ပြျောရှငျစှာ ဖွတျသနျးနတေဲ့ သူမကတော့ စိတျထားလေး လညျး ကောငျးသလို ပရိသတျတှနေဲ့ ရငျးနှီးစှာ ဖွတျသနျးတတျသူ တဈယောကျရဲ့ အထာတှေ မရှိတဲ့ သူမရဲ့ စိတျထာလေးတှကွေောငျ့ သူမကို ခဈြပရိသတျတှကေ ပိုပိုလို ခဈြနကွေတာပါ အခုလတျတလောမှာ သူမကတော့ ဖိတျကွားစထားတဲ့ ပှဲအတျော မြားမြားကို တကျရောကျ ခြီးမွှငျ့ပေးရှိပွီး ပှဲတပှဲတကျတိုငျး သူမရဲ့ ဖကျရှငျပုံရိပျလေးတှကေ လူတှရေဲ့ နုတျဖြား မှာ ရေ ပနျးစားလို့ လညျး နပေါတယျ သူမရဲ့ အနုပညာလှုပျရှားမှု ပုံရိပျလေးတှကေတော့ ဇာတျလမျးတှဲလေးတှကေို ရိုကျကူလေး နသေလို ရုပျရှငျဇာတျကားတှေ လညျး ရိုကျကူးလို့ နပေါတယျ အခုတခါမှာ ဆိုရငျလညျး သူမရဲ့ ပရိသတျတှေ အတှကျ အလှမျးပွေ “ဘဝဆိုတာ မမြှျောလငျ့ထားတာတှပေဲ ဖွဈလာတာမြားတယျ မဟုတျလား မမြှျောလငျ့ပဲ ရလာတှေ သိလာရ တာ တှကေ ပိုပွီး ရငျခုနျစရာကောငျးပါတယျ” ဆိုတဲ့ စာသာလေး နဲ့ သူုမရဲ့ အလှပုံရိပျလေးတှကေို တငျဆကျပေးထား တာကို ခဈြပရိသတျတှေ သိရှိခံစားနိုငျအောငျ လို့ ပွနျလညျလို့ မြှဝပေေးလိုကျပါရစနေျော ခဈြ ပရိသတျကွီး က အေးသော ငျးလေးကို ခဈြရငျ တခုခုပွောခဲ့နျော ….အနုပညာရှငျတှရေဲ့ နစေ့ဉျလှုပျရှားမှု ပုံရိပျလေးတှကေို သိရှိခံးစားနိုငျအောငျ ဇီးကှကျ Pageလေးကို Like လေး လုပျဖို့ ပွောခဲ့ပါရစနေျော.….…။
“အလွမ်းရဲ့ အလွန်မှာ အလွန် လွမ်းနေတဲ့” မင်းသမီးချောလေး အေးဝတ်ရည်သောင်း
မြင်သူတကာ မှင်သက်သွားလောက် အောင် လှနေတဲ့ ခေးလေး ခင်ဝင့်ဝါ